स्वास्थ्य मन्त्रायलको त्रुटि - समय-समाचार
स्वास्थ्य मन्त्रायलको त्रुटि
समय-समाचार आईतबार, २०७७ जेठ ११ गते, ०८:३६ मा प्रकाशित
कोरोना सम्बन्धी नियमित ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक त्रुटि गर्दै आएको छ । गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि संवेदनशील नबन्दा मन्त्रालयको कोरोना अपडेटमा पटकपटक समस्या भेटिँदै आएको छ ।
आइतबार स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मोरङको बाह्रदशी–३ का ४५ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताए । जबकी, मोरङमा बाह्रदशी छैन ।
खासमा झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका हुनुपर्नेमा डा. देवकोटाले मोरङ भनेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशी भन्छन्, ‘कोरोना संक्रमण देखिएको झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा हो ।’ उनका अनुसार संक्रमित व्यक्ति एक साता अघि भारतको दिल्लीबाट आएका थिए ।
राजगढको क्वारेन्टाइनमा राखिएकै वेला उनमा संक्रमण देखिएको हो । भारतबाट आएर सिधै क्वारेन्टाइनमा राखिएकाले उनको थप कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नु नपरेको राजवंशीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार संक्रमित व्यक्तिलाई धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाने तयारी भइरहेको छ । आइतबार थपिएका १९ जनासहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय नाघेको छ ।